Bogga ugu weyn Shaqooyinka Bixiya $20 Saacadii Shahaado La'aan 2022| Codso Hadda
Waxaad moodaa inaad ka mid tahay kuwa mar weydiiyey su'aasha: "ma heli karaa shaqo aan shahaado haysan", sax? Waan ku faraxsanahay inaan bixinno jawaabta su'aashan jawaabtuna waa "Haa". Waxaa laga yaabaa inay xiiso kuu yeelato inaad ogaato in ka baxsan suurtogalnimada helitaanka shaqo bilaa shahaado ah, inaad heli karto kuwo mushaharkoodu sarreeyo (oo bixiya ugu yaraan $ 20 saacaddii).
Akhriska sii wad markaan tan sii jebiyo!
Dhowr qof ayaa hadda ka tagaya hab -nololeedkooda shirkadda waxayna raadinayaan internetka ama shaqada guriga maadaama ay iyaga siinayso mudnaan inay waqti tayo leh la qaataan qoysaskooda.
Dhinacan, dad badan ayaa shaqooyinkoodii laga joojiyay intii ay socdeen iyo masiibada darteed halka qaar kale oo badanina hadda loo adeegay furfurnaan sabab la mid ah masiibada COVID-19.
Kuwani iyo qaar kaloo badan ayaa sababay kor u kac weyn baahida loo qabo shaqooyinka shaqada-guriga-ka-mushaharka badan leh haddii kale loo yaqaanno shaqooyinka guriga-ku-saleysan.
Iyada oo la raacayo tan, maqaalkani wuxuu bixin doonaa faahfaahinta lagama maarmaanka u ah shaqooyinka bixiya $ 20 saacaddii oo aan shahaado lahayn 2022.
Halkan waxaa ah burburka waxa la fili karo:
Shaqooyinka Bixiya $ 20 Saacad Aan Darajo Lahayn 2022
Hoos waxaa ah 15 shaqooyin oo aad ku kasban karto $ 20 saacaddii adiga oo aan shahaado qaadan 2022:
Horumarinta Website -ka iyo Barnaamijyada Computerka
Darawalka Bixinta Madaxa Banaan
#1 umeerin onlayn ah
Umeerin onlayn ah waa mid ka mid ah shaqooyinka bixiya $ 20 saacad bilaa shahaado.
Sida magacu tilmaamayo, shaqadani waa inay la xiriirtaa koorsooyinka waxbaridda online. Waxaa jira shaqooyin badan oo noocan oo kale ah laakiin mid ka mid ah xulashooyinka ugu caansan hadda waa barashada ESL (Ingiriisiga oo ah luqad labaad) ardayda da 'kasta leh,
Mushaharka Dhexdhexaadka ah: Macalinka onlaynka ah wuxuu qaataa $ 36,857 sanadkii.
#2 Imtixaanka Shabakadaha
Tijaabiyaha mareegaha waa mid leh karti u leh bixinta dhaleeceyn daacad ah oo wax dhiseysa iyo warcelin ku saabsan khibradiisa/khibradeeda inta uu isticmaalayo goob.
Milkiilayaasha mareegaha waxay diyaar u yihiin inay bixiyaan adeegyada noocaas ah maadaama ay u baahan yihiin in lagu dhajiyo muuqaalka iyo shaqeynta goobahooda.
Mushaharka Dhexdhexaadka ah: Tijaabiyeyaasha mareegaha waqtiga-buuxa waxay kasbadaan $ 68,727 sanadkii.
Xaqiijinta waa shaqo kale oo bixin karta $ 20 shahaado la’aan. Waxay ku lug leedahay hubinta nuxurka qoraalka ah ee ku -qorista, naxwe ahaan, qaab -dhismeedka, higgaadda, xarakaynta iyo khaladaadka qaabaynta. Markaa, adiga oo ah akhriste, waa waajibkaaga inaad sameyso dhammaan waxyaabihii aan kor ku soo sheegnay oo ah gig kasta oo laguu qoro.
Mushaharka Dhexdhexaadka ah.
#4 Caawinta Virtual
Halkan waxaa ah mid deg deg ah oo ku saabsan waxa ay tahay inaad ka ogaato kaaliyaha dalwaddu. Kaaliyayaasha dalwaddu waxay sameeyaan ku dhowaad dhammaan waxyaalihii isku midka ahaa ee kaaliyeyaasha dunida dhabta ahi waxay ka kooban yihiin qorista iyo ka-jawaabidda emaylka, maareynta jadwalka, samaynta qaban-qaabada safarka, iyo guud ahaan u adeegidda Jack of all trades.
Haddii aad waligaa ka shaqeysay kaaliye ahaan, markaa waad fiicantahay inaad tagto maadaama u gudubka noqoshada kaaliye dalwadle ah ay ku dhowdahay mid aan kala go 'lahayn.
Mushaharka Dhexdhexaadka ah: Mushaharka dhexdhexaadka ah ee kaaliyayaasha dalwaddu waa $ 39,531 sanadkii.
Tani waa shaqo kale oo aad ku kasban karto $ 20 saacad la'aan shahaado la'aan. Sida laga yaabo inaad ogaato, Diiwaangelintu waa lagama maarmaan ganacsi kasta maadaama ay tahay dhaqan ka caawiya ganacsiyada inay horumar sameeyaan.
Xisaabiye ahaan, waa inaad diiwaangelisaa kharashyada iyo dakhliga, dib -u -heshiisiinta xisaabaadka, iyo diyaarinta bayaannada maaliyadeed. Sidoo kale, waa inaad ku fiicnaataa tirooyinka dhaqankana waa xulasho xirfadeed oo adag.
Mushaharka Dhexdhexaadka ah: Diiwaan -hayaha ayaa qaata mushahar dhexdhexaad ah $ 41,806 sanadkii.
#6 Suuqgeynta Ganacsiga Yaryar
Inta badan shaqooyinka suuqgeynta meheradaha yaryar waxay ku siin karaan $ 20 saacad bilaa shahaado. Iyo tiro badan oo shaqooyin ah oo aan naqaano ayaa hoos yimaada dalladda suuq -geynta ganacsiga yar -yar inkasta oo laga yaabo inaadan taas ka warqabin. Waxaa ka mid ah kobcinta mashiinka raadinta (SEO), suuqgeynta nuxurka, iyo mas'uul ka ah maareynta xayeysiiska khadka tooska ah ee shirkadda ee aaladaha sida Facebook iyo Google.
Marka, haddii aad aqoon u leedahay waxa iibiya iyo sida loo helo shaqada iibinta fikradda, oo aad natiijo keeni karto, markaa tan adiga ayaa iska leh maadaama ay jiraan milkiileyaal ganacsi oo yaryar oo baahi weyn u qaba adeegyadaada.
Markaad tahay ganacsade ganacsade yar, waxaan kugula talineynaa inaad hesho shahaadooyin (oo qaarkood aysan ku qarash gareynin dime). Tani waxay kuu noqon doontaa dhiirigelin ka hor macaamiisha iman kara maadaama ay ku tusayso inaad ku fiican tahay waxaad samayso.
Mushaharka Dhexdhexaadka Dhexdhexaad: Ganacsade yar oo ganacsade ah ayaa samayn kara celcelis ahaan mushahar dhexdhexaad ah oo ah $ 64,156 sanadkii.
#7 Horumarinta Website -ka iyo Barnaamijyada Computerka
Horumarinta webka iyo barnaamijyada kombiyuutarka waa shaqo kale oo bixisa $ 20 saacaddii iyada oo aan shahaado haysan.
Soo -saaraha webka wuxuu adeegsadaa koodh -siinta iyo calaamadeynta si uu u dejiyo mareegaha halka barnaamijyada kombiyuutarradu u isticmaalaan luuqado kombiyuutar oo kala duwan si ay u qoraan barnaamijyada software -ka.
Shaqooyinkani waa farsamo ahaan dabeecad ahaan waxaana badanaa sameeya dadka haysta shahaadada sayniska kombiyuutarka ama naqshadeynta garaafka. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale ku qaadan kartaa fasallada koodh -siinta ee shaqooyinkaan.
Ma qori kartaa nuxur cad, kooban, oo si fiican loo baadhay? Hadday haa tahay, markaa waxaa laguu shaqaalayn karaa qoraal madaxbannaan.
Qoraalka madaxa -bannaan waa inuu wax walba iyo wax walba ku sameeyaa, daabacaadda nooc kasta leh oo ay ku jiraan mareegaha, baloogyada, majalladaha, iyo wargeysyada.
Qoraa madax bannaan ayaa sidoo kale laga yaabaa in loo soo bandhigo gigs si uu u qoro (ama ghostwrite) buugaag.
Mushaharka Dhexdhexaadka ah: Mushaharka dhexdhexaadka ah ee sanadlaha ah ee qorayaasha madaxa -bannaan waa $ 39,706 sanadkii
#9 Dejinta Dhulka
Dhul -dhigiddu waxay ka kooban tahay waxyaalo kala duwan, min caws goynta ilaa beerista ubax, geedo, iyo geedo.
Marka, haddii aad jeceshahay inaad daryeesho cawska, markaa dhul -dhigiddu waxay noqon kartaa shaqada riyada ee aad raadineysay.
Mushaharka Dhexdhexaadka ah: Dhul -jaristayaasha waxay kasbadaan lacag dhan $ 32,030 sanadkii.
# 10 Sawir qaade
Sawir qaadistu waa shaqo kale oo bixisa $ 20 saacadii iyada oo aan shahaado haysan waxayna noqon kartaa shaqadii aad raadinaysay.
Adiga oo adeegsanaya taleefankaaga casriga ah, waxaad ku qaadan kartaa sawirro waqti kasta maalin kasta laakiin xaqiiqadu waxay tahay in sawir qaadistu ay tahay farshaxan ay dadku diyaar u yihiin inay bixiyaan lacag wanaagsan.
Haddii aad khabiir ku tahay qaadashada sawirro xirfadeed oo tayo sare leh, markaa waa kan suuqa ee tayadaada.
Mushaharka Dhexdhexaadka ah: $ 45,047 sanadkiiba.
#11 Qoraalka Caafimaadka
Qorayaasha caafimaadka ayaa qoraalada caafimaadka ee la hadlay u roga dokumentiyo la qoray. Si aad shaqadan u qabato, waa inaad xoogaa aqoon u leedahay eraybixinta caafimaadka iyo ku qor xawaaraha iftiinka.
Shirkadaha caymiska, hawlwadeennada kiiska, iyo kuwa kale ee caafimaadka ku jira ayaa aad ugu baahan diiwaannada caafimaad ee la akhrin karo.
Mid ka mid ah sababaha wanaagsan ee ay tahay inaad u tagto tan ayaa ah in ka badan toban sano hadda, waxaa jiray kaftan ku saabsan far -xumada dhakhaatiirta sidaa darteedna, baahida loo qabo qorayaasha caafimaadka.
Mushaharka Dhexdhexaadka Dhexdhexaad: Qorayaasha caafimaadku waxay kasbadaan mushahar dhexdhexaad ah $ 32,744 sanadkii.
#12 Darawalka Bixinta Madaxa Banaan
Imaanshiyaha darawalada gaarsiinta madaxbannaan ayaa meesha ka saaray waayihii mugdiga ahaa ee horraantii 2000 -meeyadii halkaasoo dadka alaab nooc walba leh la geyn lahaa meeshii ay deggenaayeen ay ahayd miro adag in la dillaaco.
Laakiin waxaa mahad leh adeegyo ay ka mid yihiin Dhiganeyaal iyo kuwo kale oo badan oo fikraddaas ka dhigay mid u muuqata mid qadiimi ah.
Adiga oo ah darawal gaarsiin madaxbannaan, waxaad ku gaarsiin kartaa cuntada makhaayadda daraasiin goobood oo dalka oo dhan ah oo waliba dadka u kaxeeya meel kasta oo ay u baahdaan si ay u tagaan darawal Uber ahaan.
Mushaharka Dhexdhexaadka ah: Darawalada gaarsiinta ayaa qaata mushahar dhexdhexaad ah $ 43,443 sanadkii.
# 13 Macalinka jimicsiga
Ma waxaad tahay dhiirigeliye weyn oo jecel inuu ka shaqeeyo? Kadib, qaado shaqada macallinka jirdhiska maadaama aad kasban karto ilaa $ 20 saacaddii xitaa shahaado la'aan.
Halkan, waajibkaagu wuxuu noqon doonaa inaad dadka siisid waxoogaa maaddaama ay aad uga soo baxaan jimicsiga jirka. Laakiin haddii aad rabto inaad ka shaqeyso xarun sida jimicsiga ama YMCA, kasbashada shahaadada onlaynka ayaa ku siin doonta gees ka sarraysa kuwa kale.
Mushaharka Dhexdhexaadka ah: Tababarayaasha jirdhiska ayaa qaata mushahar dhexdhexaad ah $ 37,241 sanadkii.
#14 Wakiilka Guryaha
Wakiilka guryaha waa mid shaqadiisu la xiriirto iibsashada ama iibinta guri aan toos ahayn. Isagu waa inuu hago dhinacyada labada dhinac ee macaamilka oo haddii kale loo yaqaan Realtor.
Shahaado looma baahna si aad u noqoto wakiil hanti ma guurto ah, laakiin si aad u xaqiijiso gobolkaaga, waxaad u baahan tahay inaad dhammaystirto waxbarashada shatiga hore ee loo baahan yahay oo aad gudubto imtixaanka xirfadeed ee gobolkaaga.
Mushaharka Dhexdhexaadka ah: $ 47,854 sanadkiiba
#15 Nadiifiyaha Guriga
Qoysas badan ayaa aad ugu mashquulsan xirfadda iyo nolosha qoyska sidaa darteed marar dhif ah ayay haystaan ​​wakhti ay ku nadiifiyaan guryahooda iyo nawaaxigooda. Iyaga oo aan lahayn ikhtiyaar kale, qoysaskani waxay inta badan kireystaan ​​nadiifiye guri.
Markaa, haddii aad diyaar u tahay inaad gacan ka geysato nadaafadda guriga dadka, shaqadan adiga ayaa leh.
Nadiifinta guriga uma baahna wax shuruud waxbarasho ah oo shaki la'aan waa mid ka mid ah shaqooyinka bixiya $ 20 saacad bilaa shahaado ah
Mushaharka Dhexdhexaadka ah: $ 25,434 sanadkiiba.
Kuwa kor ku xusan waa qaar ka mid ah shaqooyinka badan ee bixiya $ 20 saacaddii iyada oo aan shahaado haysan oo hadda adiga ayay kugu xiran tahay inaad tagto waxaad samayn karto.
Intaa waxaa sii dheer, kiisaska aad u baahan tahay inaad koorsooyinka shahaadaynta ku qaadatid onlayn, ha ka labalabeyn inaad sidaas samayso. Sidoo kale, hubso inaad noqoto kan ugu fiican ee noocaaga ah adoo ka soo saaraya agabyada shaqada gaarka ah ee aad rabto inaad ku shaqaaleysiiso oo si taxaddar leh naftaada u hormariya maadaama ay kaa dhigeyso inaad ka soocdo.
Waxaan rajeynayaa in maqaalkani kaa caawin doono ilaha dakhli dheeri ah.
Nasiib wacan markaad raadineyso shaqooyinkan 2022!
GuuleedOwl - 20 Shaqooyinka Ugu Fiican Oo Bixiya $ 20 Saacaddiiba [ama In Ka Badan] Oo Aan Shahaado Lahayn
The WayToWealth - 18 Shaqooyin Oo Bixiya $ 20 Saacad Iyadoo Khibrad/Darajo Yar Leh Ama Aan Lahayn
Macallimiinta kulliyadaha, sida qayb kasta oo macallimiin ah, waxay awood u leeyihiin inay beddelaan adduunka. Waxay taabtaan nolosha…
19 Hiwaayad oo Dhaqaale kuugu Sameeya 2022
Intee in le'eg ayay Chefyadu sameeyaan| Dakhliga ugu fiican
Inaad noqoto cunto kariye xirfad leh waxay albaabka u furaysaa fursado shaqo oo badan oo kala duwan. Su'aal ay dad badan is weydiiyaan...